Tag: wasiir | Sagal Radio Services
Mid ka mid ah Wasiir kuxigeenadii la magacaabay oo is casilay
Sagal Radio Services • News Report • February 7, 2015
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Gaashaandhiga C/raxmaan Kulmiye Xirsi ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii loo magacaabay, kadib markii uu sheegay inaan lagala tashan.
Wasiir katirsan Dowlada oo kasoo horjeestay Qodob kamid ah Heshiiskii ay wada Gaareen Dowlada iyo Puntiland
Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibeda ee xukuumada Somalia Mahad Maxamed Salaad ayaa sharci daro ku tilmaamay qaar ka mid ah qodobada heshiiskii ay shalay magaalada garowe ku kala saxiixdeen maamulka Puntland iyo dowlada dhexe.
GOODAX: "Waddooyinka u Xiran Al-shabaab si Awood ah ayaa lagu Furayaa"
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Somalia, C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay xoog ku furayaan waddooyinka u xiran Al-shabaab.
Cabdulaahi Goodax:oo sheegay in ay jiraan musuuliyiin leexsata gargaarka dadka loogu tala galay
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre ayaa xusay inay jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo leexsaday raashin gar-gaar ahaa.
Wasiirka arrimaha gudaha oo sheegay in maamulo KMG ah ay dhisi doonaan
Wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Md. C/kariim Xuseen Guuleed, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya, ay maamulko KMG ah u dhisi doonto gobollada iyo deegaannadii Shabaab laga saaray.